लज्जित प्रधानमन्त्री - परिहास - नेपाल
प्रधानमन्त्री लज्जित त भए तर यो लज्जा कसप्रति लक्षित हो ? त्यो स्पष्ट भएको छैन । मलाई लाग्छ, यो लज्जा नेपाली जनताभन्दा पनि भारतप्रति हुनुपर्छ । किनभने भारतजस्तो देशले पठाएको पत्र उनले पढ्न पाएनन् वा भनौँ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको पत्र पढ्नबाट वञ्चित भए । पत्र पढ्न नपाएका कारण उनले त्यसमा के लेखिएको छ, थाहा पाउन सकेनन् । सूचनाको ग्यापले बीचमा के–के बोलियो के–के । त्यसका लागि उनी लज्जित छन् ।
भारतले पत्र पठाएको छ, त्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन । यो जति लज्जाको विषय अरु के होला ? भोलि कसै गरी भारत जानुपर्‍यो भने कुन मुखले जानु ? नरेन्द्र मोदीले सोध्लान्, ‘क्या हो ओलीजी, तपाईं त हामीले पठाएको पत्रको जवाफ पनि नदिने ? के ताल हो यो ?’
यस्तो बेला के जवाफ दिने ? ‘तपाईंको पत्रै म कहाँ आइपुगेन’ भन्ने ? यसो भन्नुपर्दा कति बेइज्जत होला ? अरुको पत्र नपुगेको भए त्यसको कुनै मतलब छैन । नरेन्द्र मोदीकै पत्र नपुग्नु भनेको ठूलो लज्जाको विषय हो । प्रधानमन्त्रीलाई यही लज्जा महसुस भएको हुनुपर्छ ।